Valiny haingana sy famerenana amin'ny laoniny ny vonjy taitra | Fiaretana haran-dranomasina
Ny haran-dranomasina dia iharan'ny fihenjanana eo an-toerana, isam-paritra ary manerantany. Na dia misy aza ny fandrahonana maharitra amin'ny haran-dranomasina toy ny kalitaon'ny rano sy ny fihoaram-pefy dia mitaky fanalefahana ny hetsika fitantanana maharitra, ny trangan-javatra mahery vaika (ohatra, tafio-drivotra mahery, fiparitahan'ny solika) dia matetika no mitaky valiny hafa avy hatrany na valinteny maika miaraka amin'ireo hetsika fanamboarana haran-dranomasina sy famonjena. zanatany haran-dranomasina. Ny fiatrehana ny fiantraikany haingana sy amin'ny fomba mahomby dia zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny mety hisian'ny haran-dranomasina hanome serivisy sarobidy ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny ho avy. Mba hamaliana toy izao, ny drafitra valiny dia tokony hamboarina mialoha ny tranga rehetra. Ny fampahalalana bebe kokoa dia azo jerena ao amin'ny lesona Rapid Response & Emergency Restauration an'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampianarana amin'ny famerenana amin'ny laoniny an-tserasera.
Ny drafi-pamaliana dia tetik'ady nifanarahana izay azo tanterahina raha misy tranga manimba ny harato mba hanalefahana haingana ny fiantraikany sy hampihenana ny fahavoazana fanampiny. Na dia mety mitaky hetsika tokana aza ny fiantraikany samihafa, matetika ny drafitry ny valiny dia matetika misy singa iraisana:
Tafiditra ao anatin'ireo sampandraharaha sy fikambanana rehetra nanaiky ny handray anjara amin'ny hetsika famaliana, ao anatin'izany ny mpitarika mitarika (na olona tondro zotra) sy ekipa manana andraikitra manokana sy andraikitra fantatra.
Ao anatin'izany ny lojika izay tokony hatao amin'ny toerana hiantohana ny famatsiana sy ny fisian'ny fitaovana sy ny fananana mandritra ny hetsika voalohany.
Drafitra ho an'ny fanombanana haingana ny haran-dranomasina
Asio tombana arak'asa vita aorian'izay hetsika iray hamaritana ny halavan'ny toerana misy ny fahasimban'ny vatohara, ary ny famaritana ireo asa maika tokony harahina.
Drafitra fanarenana maika na famerenana amin'ny Kilonga
Ao anatin'izany ny fanesorana ny loharanon'ny fiantraikany sy ny loza hafa tavela, ary ny hetsika fanavotana ny vatohara toy ny fanarenana na ny fanamafisana ny sombintsombiny tapaka na ny fanjanahana.
Plants amin'ny hetsika famerenana amin'ny laoniny fanampiny na faharoa
Ao anatin'izany ny hetsika toy ny famindrana ireo valan'aretina voavonjy ho any amin'ny masinina, ny famafazana haranosina miverina any amin'ireo vatohara simba, ary ny fanamafisana ny fihenan'ny rafitry ny kolonely simba.
Ahitana ireo hafatra lehibe sy fampahalalana lehibe hozaraina amin'ny mpihaino samihafa toa ny mpiara-miombon'antoka na ny vahoaka.
Rava ny rivo-doza
Ny oram-baratra tropikaly (antsoina hoe rivodoza, rivo-doza na rivo-doza) dia marihin'ny rivotra mahery sy ny onja, orambe mivatravatra ary tafio-drivotra (fiakaran'ny rano noho ny rafitra ambany-tsindry). Ny tafio-drivotra mahery vaika dia mitranga mandritra ny vanim-potoana azo trandrahana, nanomboka ny volana jona ka hatramin'ny novambra any amin'ny Ranomasimbe Atlantika ary Novambra hatramin'ny aprily any amin'ny Ranomasimbe Indianina sy Paci ﬁ c.
Rehefa tsy dia masiaka loatra ary tsy dia miovaova matetika, ny rivo-doza dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny vatohara amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahasamihafana misy ny haran-dranomasina ary ny fampihenana ny adin-tsavony. Ny rivo-mahery sy mahery vaika kosa dia mety hiteraka fahavoazana be amin'ny haran-dranomasina, ary ny rivo-doza matetika mitranga isaky ny roa taona na latsaka dia afaka misakana ny fitrandrahana vatohara.
Ny oram-baratra tropikaly dia miteraka fahasimbana samihafa amin'ny haran-dranomasina, manomboka amin'ny fahasimbana malefaka na ampahany amin'ny famoizana ny vatohara. Ireo oram-baratra ireo dia mety hiteraka fahafatesan'ny haran-dranomasina avo noho ny abrasion, fracture ary detonment colony. Matetika no mitohy ny fahafatesan'ny vatany rehefa lasa ny tafiodrivotra satria ny tazo maratra dia mora voan'ny aretina, ny fandehanana ary ny mialoha.
Ratra miaraka amin'ny fahasimban'ny abrasion taorian'ny Hurricane Emily ao amin'ny 2004. Sary © Juan Carlos Huitrón
Ny rivotra mahery sy tondradrano mandritra ny rivo-doza tropikaly dia mety hiteraka fofona be dia be avy amin'ireo trano lehibe, lahatsoratra an-trano, ary entana any ivelany, izay mety hisintona ao anaty ranomasina ary manimba ireo vatohara.
Ity fizarana ity dia mamintina ny Fampitandremana mialoha sy ny fihetsiky ny fihetsiketsehana haingana: hetsika natao hanalefahana ny fiantraikan'ny rivodoza mahatsiravina amin'ny vatohara ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanglisymanokatra fisie PDF ) ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniolamanokatra fisie PDF ). Na dia voafaritra manokana amin'ny Puerto Morelos, Mexico, ny singa fototra amin'ity protocol ity dia azo ampiharina any amin'ny faritra rehetra amin'ny haran-dranomasina.
Ny firafitry ny fandidiana
Ny drafitra na ny fihetsiketsehana misy valiny miaraka amin'ny rafi-piasa dia tokony hiomanana alohan'ny vanim-potoana rivo-mahery miaraka amin'ireo fikambanana mpandray anjara rehetra. Amin'ity fomba ity, ny hetsika fandraisana andraikitra dia azo tanterahina haingana. Ny Puerto Morelos Response Protocol dia misy vondrona miasa etoana.
Ity komity ity dia vita amin'ny mpandrindra, mpitarika ny ekipa valin-drano ao anaty rano, ary mpitarika iray sy serasera. Ny komity dia mikasa, mitarika ary mandrindra ny hetsika rehetra amin'ny protocol, ao anatin'izany:
Famerenana sy fanavaozana ny protocol isan-taona
Manomana sy mandrindra ny fanatanterahana drafi-pamaliana
Fananganana, fiofanana ary fandrindrana ireo ekipa valin-teny na 'brigades'
Mitantana vola hanatanterahana asa
Fanohizana sy fanohizana mitohy miaraka amin'ireo andrim-panjakana mpiara-miasa
Ireo mpamaly voalohany dia miresaka momba ny hetsika famaliana voalohany. Sary © Gisela Maldonado
Ireo brigada dia ekipa misy ny mpizara 4-6, mpanamory 2-4, mpanampy sambo 1-2, ary mpanamory iray sy mpiambina iray izay voaofana hanatanteraka ny hetsika taorian'ny rivo-doza. Ny hetsika famaliana brigade dia misy:
Fampiharana fanaraha-maso haingana ny haran-dranomasina vetivety taorian'ny tafiodrivotra
Fanesorana ny taimban-trano sy ny korontam-bato hiala ny vatohara taorian'ny oram-baratra
Fanatanterahana ny hetsika famaliana voalohany, toy ny famerenana indray, ny fandalinana ary ny fanamafisana ireo valan-javamaniry simba sy vaky,
Ny fanesorana sy ny fahazoana ireo kolonely halevina ao ambany fasika
Fanesorana na fanamafisana ny korontan-dovitra maty ary manala ny tsimoka ao anaty haran-dranomasina
Fametrahana hetsika valinteny faharoa, toy ny fanamafisana ireo sombin-drafitra, ny fametrahana ny valan-javamaniry ao amin'ny valan-jaza ary ny fitazonana ny toeram-pivarotana sy ny famerenana amin'ny laoniny.
Ny mpikambana ao amin'ny Brigade dia mametraka ny sambo ary manomana ny fitaovana scuba ao aminy mandritra ny andro fiofanana eo ambonin'ny rano. Sary © Jennifer Adler
Ity ekipa ity dia misy mpitarika iray ary ekipa lozika roa miaraka amin'ny olona 2-3 tsirairay avy. Ity ekipa ity dia mandrindra ny lozika sy ny asa ilaina ilaina hanatanterahana ny protocol, ao anatin'izany:
Manamora ny serasera anatiny sy ivelany eo amin'ny komity, ny brigade valiny, ary mpiara-miasa
Fanomezana fitaovana, solika, sakafo, zava-pisotro ary kojakoja hafa ho an'ny brigades
Manara-maso ny asa sy ny toerana misy ny brigade tsirairay
Fitaovana fanaka, sambo, ary kojakoja ilaina amin'ny hetsika famaliana
Ny fanangonana sy ny fanariana doka dia averin'ny brigade amin'ny valiny
Manomana, mitazona ary miaro fitaovana (boaty fitaovana, kitapo fanampiana voalohany, sns.)
Ilaina ny ekipa iray amin'ny fandrindrana ny lozika sy ny serasera amin'ny drafitry ny valiny. Sary © Jennifer Adler
Ny tambajotra fikambanana mpiara-miombon'antoka dia zava-dehibe amin'ny fahazoana ny loharanon-karena sy ny mpiasa ilaina amin'ny valiny mahomby sy ara-potoana. Ny mpiara-miasa dia mety ahitana ny masoivoho governemanta, orinasa tsy miankina, ONG, sy ny hafa maniry handray anjara amin'ny ezaka famaliana.
Fanomanana sy fanomanana
Alohan'ny vanim-potoana rivo-doza dia tokony hatao ny hetsika manaraka hanomanana sy hiomanana amin'ny valin'ny haran-dranomasina haingana raha misy rivo-doza tropikaly.
Famakafakana sy fanavaozana drafitra famaliana - Isan-taona taorian'ny vanim-potoanan'ny tafio-drivotra sy ny fihetsiky ny valin-teny dia tokony havaozina sy hatsaraina kokoa ny drafitry ny valiny, miankina amin'ny valiny sy ny fanombanana avy amin'ireo brigade valiny.
Fanomanana drafitra fanao isan-taona - Ity drafitra ity dia mamaritra ny hetsika tokony hapetraka mba hanomanana alohan'ny vanim-potoana manaraka ny rivo-doza. Ny lafiny lehibe dia ny drafitra famatsiam-bola sy ny fitantanana ny harena ary ny fitantanana ny filàna fitaterana (ohatra, sambo na fiara hampiasaina mandritra ny valiny).
Ny fametrahana fiaraha-miasa eo amin'ny Institution - Ny fiaraha-miasa dia tokony hatao alohan'ny vanim-potoana rivo-doza miaraka amin'ireo masoivoho sy fikambanana afaka manampy amin'ny fanatanterahana ny protocol valiny. Ny ohatra ohatra dia mpiara-miombon'antoka izay afaka manome toerana ho an'ny fandidiana na mitazona fitaovana na mpamatsy.
Politika fiantohana tsara ho an'ny Brigade valiny - Ny politikam-piantohana vonjimaika (ohatra ny fiantohana diving) dia tokony hisy hanarona ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga mandritra ny hetsika eny an-tsaha.
Manomana fitaovana sy fitaovana ho an'ny Brigade valiny - Alohan'ny vanim-potoanan'ny oram-baratra, ny fitaovana sy ny fitaovana ilain'ny ekipa mpandray valiny dia tokony vidiana na soloina ary atambatra mialoha amin'ny tranga tsy misy rano. Zava-dehibe izany satria mety ho voafetra ny fahazoana fitaovana aorian'ny trangam-baratra.
Manatanteraka fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny fanadihadiana - Ny fanaraha-maso ny tsipika momba ny vatohara eo an-toerana dia tokony hatao isan-taona na semi-isan-taona alohan'ny vanim-potoanan'ny tafio-drivotra, na ny angona tokony ho azo amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka eto. Ny fampahalalana momba ny fototra dia ampiasaina mba hampitahana sy hahafantatra ny haben'ny fiantraikan'ny rivo-doza amin'ny vorondrano.
Mametraka tambajotra serasera - Ny drafitra dia tokony hapetraka mba handrindrana sy handefasana fampandrenesana ny komity, ireo brigady amin'ny valiny, ary mpiara-miasa. Ny fomba fifandraisana dia tokony ho azo idirana mandritra ny tsy fahombiazan'ny famantarana elektrika na finday, ary tokony hajanona hatrany ny fampahalalana momba ny mpitondra tarika.
Brigade valiny momba ny fampiofanana - Ny Brigades dia tokony hampiofanina alohan'ny fotoanan'ny tafiotra amin'ny hetsika eny an-tsaha, anisan'izany ny fanombanana ny haran-dranomasina haingana, fanesorana zavatra mavesatra ao anaty rano, fametahana na fanamafisana ny haran-dranomasina na potipotika efa simba, ary ny fanampiana voalohany an'ny SCUBA antsitrika sy CPR.
Famantarana ireo loza sy fampihenana ny loza - Ny loharano mety hiteraka fahasimbana amin'ny vatohara raha misy rivo-doza dia tokony ho fantatra, voalaza amin'ny masoivoho eo an-toerana, ary esorina alohan'ny vanim-potoanan'ny tafio-drivotra. Ny fandrahonana dia mety misy ny fotodrafitrasa izay tsy feno na mila fanamboarana, hazo maina na sampana any amoron-tsiraka, ary loharanom-pifandimbiasana (ohatra, fantson-drano, fanondrahana, fako). Ny fanombanana ara-pomba ofisialy momba ny tranokala, ny toe-javatra an'ny mpanamory ary ny fitaovana dia azo ampiasaina.
Ny fananganana tobim-pianakaviana - Azo ampiasaina amin'ny sampana miaro ny haran-dranona voavonjy amin'ny vatohara ny onja rehefa avy ny tafio-drivotra, avelao hivezivezy ny haran-dranomasina alohan'ny famindrana azy any amin'ny haran-dranomasina. Ny mpitsabo mpanampy dia tokony haorina telo volana farafahakeliny alohan'ny vanim-potoana rivo-doza mba hizaha toetra endrika hafa.
Dingana fampitandremana mialoha
Ity dingana ity dia ahitana hetsika tokony hatao mandritra ny fisian'ny tafiotra tropikaly ao amin'ilay faritra, na eo amin'ny fomba manakaiky sy miverina. Ny Puerto Morelos Protocol dia manolotra rafitra fampitandremana mialoha miaraka amin'ny sokajy fanairana avy amin'ny Blue (loza faran'izay kely) ho an'ny mena (loza mety hitranga) amin'ny vanim-potoana hisian'ny rivo-doza.
Ny ekipan'ny valin-kafaliana dia tokony hampandrenesina ny fisian'ny rivo-doza mety hanam-potoana hiomanana amin'ny fandraisana andraikitra haingana sy mahomby. Ny karazana fihetsika izay natao tamin'ny dingana fampitandremana tany am-boalohany dia miankina amin'ny haavon'ny fanairana, izay miankina amin'ny halaviran'ny rivo-mahery ary ny fihodinana na ny fialana amin'ny faritra.
Raha ny rivo-doza tropikaly dia voalaza fa hisy fiantraikany amin'ny faritra iray eo an-toerana, ny Komity dia tokony hanara-maso tsy tapaka ny tatitra momba ny vinavina eo an-toerana ary hanohy arakaraka ny haavon'ny fandrahonana.
Fiatoana amin'ny tafio-drivotra tropikaly. Avy amin'ny: Zepeda et al. 2018
Ny fihetsiky ny rivo-doza tsy ho any amin'ny faritra tratra ary ny fepetra eo an-toerana dia tokony harahi-maso hamaritana hoe oviana ny brigades valinteny azo apetraka. Natao hanombanana ny toeran'ny ranomasina amin'ny ankapobeny, ny fahitana ny rano, ny fiarovana ny làlana fidirana mankany amin'ny ranomasina, ny fiarovana ny mombamomba ny brigade (ary ny fianakaviana), ary ny toeran'ny fiara, ny sambo ary ny fitaovana ampiasaina. Ny fiarovana ny ekipa valin'ny valim-panontaniana dia ilaina mandritra ity dingana ity.
Fiatoana amin'ny dingana fihodinana tropikaly. Avy amin'ny: Zepeda et al. 2018
Ny fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ireo rafitra sy hetsika fampitandremana mialoha dia hita ao amin'ny Protocol Response Aterineto momba ny Fampitandremana sy ny Rapid Response: hetsika natao hanalefahana ny fiantraikan'ny rivodoza mahatsiravina amin'ny vatohara ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanglisymanokatra fisie PDF ) ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniolamanokatra fisie PDF ).
Famahana fanimbana haingana
Raha vao alefa any an-dranomasina ny serivisy valinteny, ny asany voalohany dia ny fanombanana haingana ny haran-dranomasina mba hamaritana ny haavon'ny fahasimban'ny harambato eo an-toerana. Ity fanombanana ity dia tokony hitranga ao anatin'ny andro maromaro aorian'ny tafiotra na rehefa tsy voaaro ny fepetra amin'ny asa lahimatoana.
Ny fanombanana haingana dia tokony hamantatra ny fahavoazana lehibe sy ny faritra misy ny harato lehibe indrindra mba ho loha laharana ny faritra ahazoana valiny haingana. Ny otrikaretina nateraky ny tafio-drivotra dia tokony ho voarakitra ary koa ny haavon'ny fidiran-javatra takiana hanesorana azy. Ireo tekinika manaraka ireto dia natokana hampihena ny fotoana ao anaty rano.
Fanaraha-maso i Manta
Ity fomba ity dia ahitana snorkeler iray izay tarihin'ny moramora rehefa mitazona fitaovam-pitaterana, manome alalana ny snorkeler handrakitra ny vaovao ary hihazona fitaovana sy fakan-tsary GPS ho an'ny sary na horonan-tsary. Ny fampahalalana koa dia azo raisina an-tsoratra ao amin'ny sambo avy amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny brigade amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana famantarana ekena.
Manome marika ireo mpikambana ao amin'ny sambo mba handrakitra ny angona mandritra ny tombana. Sary © Jennifer Adler
Fanaraha-maso ny Drone
Ny Drones dia azo ampiasaina amin'ny fanombanana fanimbana amin'ny habakabaka hahazoana famoahana horonantsary avo lenta sy horonantsary avo lenta ary misy sary betsaka kokoa noho ny sary satelit. Ny angon-drakitra an'habakabaka dia afaka manombatombana ny habetsaky ny korontana nateraky ny tafio-drivotra nateraky ny tafio-drivotra tany amin'ny faritra mando, tany anaty harambato ary teny amoron-tsiraka.
Drone nampiasaina hanadihady ny topografia ny vatohara. Sary © Tim Calver
Ireo karazana angon-drakitra tokony hosoratana ho an'ny fanombanana haingana haingana dia misy:
Fanolorana ireo sombin-dranomasina izay mila fanamafisana eo no ho eo
Ny fisehoan'ny fractures ao amin'ny rafitry ny vatohara na amin'ireo zanatany goavambe
Ny fisian'ny razana nandevina teo ambanin'ny antsanga
Ny fisian'ny razana miharatsy, voapetaka ary / na mitarika ratra
Ny fahasimbana isan-jaton'ny vatohara mifandraika amin'ny faritra manodidina
Ny fisian'ireo korontam-bato na fatin'ny kororo maty izay mivezivezy ary mety hiteraka fahasimbana
Porofo na fahasimban'ny fahasimban'ny rafitry ny vatohara
Tokony hodinihina avy hatrany ny angon-drakitra, ary ny vokatra dia tokony hampiasaina hamoronana sari-tany mampiseho ireo tranonkala voakasik'izany. Ireo angon-drakitra ireo dia azo ampiasaina amin'ny famoronana drafitra ho an'ny valiny sy ny hetsika famerenana amin'ny laoniny.
Ny ezaka fanarenana sy ny famerenana amin'ny laoniny taorian'ny zava-nitranga nipoiran'ny rivo-mahery matetika a Kilonga ary ny faharoa hamaly. Ny tanjon'ny valim-bavaka voalohany dia ny fanamaivana ny fahasimban'ny rivo-doza ary ny fisorohana ny fahavoazana hafa. Ireo hetsika ireo dia tokony hitranga avy hatrany na ao anatin'ny iray volana aorian'ny tafiotra mahery ary ahitàna ireto hetsika manaraka ireto:
Ny poti-javatra vokatry ny rivo-doza dia mety ho anthropogen (fitaovana fanamboarana, fitaovana, fanariam-pako, mpandoto) na voajanahary (vatan-kazo, sampana, akora voajanahary), ary ireo karazany roa ireo dia mety manimba ny vatohara. Ny sisa tavela amin'ny vatohara dia afaka manohy mivezivezy sy manimba ny haran-dranomasina sy ny zavamaniry benthika hafa. Ny hetsika dia misy ny fanadiovana ny tora-pasika sy fanesorana ireo zavatra mitsingevana any an-dranomasina na napetraka amin'ny faritra matevina sy vatohara.
Famerenana sy fanarenana ny vatohara
Ny tafiotra mahery dia afaka mamorona sombin-dranomasina marefo, manapaka na manafoana ny zanatany, manimba ny vatolampy mafy ary mamiratra vatohara malemy. Ny zavamananaina voakasik'izany dia tokony haverina sy apetahana indray mba hampitomboana ny fahasitranana.
Famerenam-bolan'ny Caribbean elkhorn fambolena haran-dranomasina. Sary © Claudia Padilla
Manala ireo sombintsombiny marefo sy maditra
Ny famafana ny haran-dranomasina sy ny fanala mihetsiketsika dia mety hanimba ny zavamaniry. Ireo dia tokony esorina na tsy hiorina mba hampihenana ny fahasimbana amin'ny ho avy.
Ny valiny faharoa dia ahitana ny fanavotana ny vatany izay tsy azo nihanihana nandritra ny ezaka famaliana natao voalohany. Ireo hetsika ireo dia tokony hitranga ao anatin'ny herinandro maromaro aorian'ny volana aorian'ny tafiotra mahery ary mampiditra ireto hetsika manaraka ireto:
Fanamafisana ireo sombintsombiny amin'ny haran-dranomasina
Ny Coral dia manana ny tranainy indrindra amin'ny fivelarana ao anatin'ny 2 herinandro amin'ny hetsika. Mamaha ireo sombin-dranomasina izay mety ho tafavoaka velona na ny fahazoana famerenana indray dia tokony hangonina ary hafindra ao amin'ny valan-javamaniry haran-dranomasina.
Manangona sombin-tany vatomamy nateraky ny tafiotra nentina tany amin'ny akanin-jaza akaiky azy. Sary © Foibem-paritry ny fambolena sy fiompiana jono (CRIAP) / Ivon-javamaniry nasionaly (INAPESCA)
Fanamafisana ireo sombin-drafitra
Ny simba na ny ampahany amin'ny famoretana haran-dranomasina dia azo aorina miaraka amin'ny tanimanga epoxy, simenitra na fitaovana fanamafisana hafa. Raha tena lehibe ny fracture dia ilaina ny fanamafisana amin'ny vy vy na simenitra.
Fikojakojana ny akanin-jaza ary toerana misy fiantraikany
Ilaina ny fikojakojana ny fikolokoloana ny vatany sy ny tranokala voadin'ny oram-baratra mba hitazomana ny fitomboan'ny macroalgal. Ny fanaraha-maso ara-dalàna dia ilaina ihany koa amin'ny fanaraha-maso ny toe-piainan'ny razana ao amin'ny masinina alohan'ny hampidirany azy ireo ny haran-dranomasina.
Ny fivoaran'ny rivodoza sy ny hamafin'ny rivodoza dia mihamitombo manerana an'izao tontolo izao. Raha mbola betsaka ny ezaka atao hamaliana sy hamerenana ny vatohara aorian'ireo rivo-doza lehibe, misy lesona azo ianarana avy amin'ny faritra samihafa momba ny asany. Vakio ny tranga roa Aostralia ary Puerto Rico mikasika ny ezaka vonjy maika sy haingana valiny taorian'ny oram-baratra lehibe nitranga tao 2017.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoProtocolo de Alerta Temprana sy Respuesta Inmediata: Acciones para Mitigar el Impacto de los Ciclones Tropicales en Arrecifes Coralinosmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoProtocolo de Alerta Temprana sy Respuesta Inmediata al Impacto de los Ciclones Tropicales en Arrecifes del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos: Acciones para Mitigar el Impacto de los Ciclones Tropicales en los Arrecifes Coralinosmanokatra fisie PDF